Ishiti yeShawari yeglasi yeCarbon, iphepha leCarbon Glass Laminated, umxhasi weCarbon Fibre Glass Sheet
Inkcazo:Ikhabhathi yeglasi yeKhabhoni,Ikhabhathi yeglasi yeKhabhasi Mid,Ikhabhathi yeglasi ye-Carbon Glass,Ikhabhathi yeglasi yeCarbon Fibre,,
Home > Imveliso > Iphepha leCarbon Fibre > Ikhabhathi yeglasi yeKhabhoni
Iintlobo zeMveliso ze- Ikhabhathi yeglasi yeKhabhoni , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ikhabhathi yeglasi yeKhabhoni , Ikhabhathi yeglasi yeKhabhasi Mid ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukuthengiswa okushushu okuphezulu komgangatho weglasi yecarbon
Uyilo lwePlatiyini yeClasson yoLwakhiwo lweCarbon
I-RC Drone Hobbby yeeNxalenye zeKhabhasi yeGlasi yeKhabhasi
I-2mm ikhabhasi yeglasi ephepheni ukuya kubukhulu be-Diy
I-CNC 4.0 I-Thickness Carbon Glas Sheet ye-logo
iphepha lebhabheli yeglasi ye-DIY yokusika inkonzo 2mm
I-5.0mm yeKhabhasi yeGlass Sheet 3K yokuGqibezela ukusebenzisa iToyi
Sebenzisa amaphepha amdaka eglasi ekhompyutheni
I-3K Twill yeCarbon Fibre yeGlass sheet kwezahluli ezininzi
I-CNC ukusika iMatile yeeKhebhu zeKlabhoni yeKhabhoni
Iiplati zeBarbon zePlaza yeCarbon Backsplash yexabiso eliphezulu
Iidrones / RC Isakhelo seplabhlikhi yeKhabhoni kwiBhalbhu
Zonke iiThayile zeCarbon zeClassbon zeCarbon
IBhodi yeeCarbon Carbon Hardness yeNkonzo
I-CNC ikhabhoni enomgangatho weglasi
Indawo yokuThengisa iAmazon eshushu yeGlass Carbon Plate
Iiplaza zeglasi zeKhabhoni Matte Glossy Hobby Toy
I-3K ye-Carbon Glass Sheets ye-3K yee-rotors ezininzi
Iphepha le-3K Elukiweyo leKhabhoni yeKhabhasi yeeMijikelezo ezininzi
I-0,5x250x400 yokuhombisa umphezulu wekhabhathi yeglasi
Iipleyiti zeglasi ye-Carbon zingasetyenziselwa ukutshintsha iiCarbon Fibre Plates zeedroni. Ubungakanani obuqhelekileyo beCarbon Glas Sheet emalunga ne-500x600mm. Ingcaciso
Uyilo lwePlatiyini yeClasson yoLwakhiwo lweCarbon Iipleyiti zeglasi yekharbon zinokusetyenziselwa amashishini okanye iidroni. Ngokubanzi ibiya kwenziwa kumnyama. Inkonzo yesiko ye-CNC iya kubonelelwa kunye. Iipleyiti zeglasi yekharbon zilula. Nceda...
Ixabiso lento: USD 38.5 / Piece/Pieces
Icandelo le-RC Drone Hobbby Icandelo leCarbon Glass Sheet / G10 F10glass Plates Eli phepha licocekileyo leCarbon Fibre Glass Sheet, iRC Drone Hobbby Icandelo leCarbon Glass sheets lithandwa kakhulu kwizixhobo zeglasi zebhabhalaza zeglasi. Zombini...
I-0.5mm-7.0mm yephepha lekhabhoni lephepha lekhosi elisikwe kubungakanani be-Diy Malunga nobume be-0.5mm-7.0mm yecarbon Glass sheet eye yasikwa kubungakanani be-Diy, inokwenziwa ukuba ibe yi-carbon fiber ecocekileyo okanye iglasi yentsimbi ye-fiber...
I-CNC 4.0 I-Thickness Carbon Glas Sheet ye-logo Oku iglasi sheet carbon ecocekileyo, RC ikude Hobbby Parts Carbon Glass Sheet yaziwa kakhulu kwizinto iglasi carbon fiber. Zombini i-0/90 degree kunye ne-0/45 / -45 / 90 degree (iQuasi-isotropic) ubume...
iphepha lebhabheli yeglasi ye-DIY yokusika inkonzo 2mm Iipleyiti ze-G10 Fiberglass DIY yokusika inkonzo ye-2mm inokwenza ngokupheleleyo amandla e-carbon fiber kunye ne-modulus ye-elastic, kulwakhiwo lunokususa i-carbon fiber sheet unidirectional...
Ixabiso lento: USD 79.5 / Piece/Pieces
I-5.0mm yeGlasi yeKhabhoni eneLamitha engu-3K yokuSebenzisa iThoyizi I-5.0mm yeCarbon Sheet 3K Surface Toy yokuSebenzisa isetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zezinto zesinyithi, iimpahla zesikhumba, iipensile, iincwadana zamaphepha, ubucwebe,...
Ixabiso lento: USD 61.5 / Piece/Pieces
Ukusetyenziswa ngokuBanzi kweeqhekeza zeglasi zekhabhoni ze I-Cnc Drone Frames Ukusetyenziswa banzi kwebhokisi yeglasi yecarbon ethwala amandla amakhulu anzima wobunzima bokukhanya, osetyenziswa ngokubanzi kwimodeli yehelikopta nemakethi...
Ixabiso lento: USD 51.3 / Piece/Pieces
I-3K Twill yeCarbon Fibre yeGlass sheet kwezahluli ezininzi Eli phepha leCarbon Glass Laminated Sheet , 3K Woven Carbon Glass Sheet yeMulti-rotors ezininzi zithandwa kakhulu kwizixhobo zefayibha zekhabhoni. Zombini i-0/90 degree kunye ne-0/45 / -45...
Ukusika i-CNC Till Matte 3k Carbon Glass Mid Sheets Isakhelo sethu seCarbon Glass sheets sokwenza i-CNC Ukusika inomgangatho we-matte we-3K omnandi. I-1k, 1.5k, ii-3k kharbhaydi iipleyiti nazo zilungile, ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Ubungakanani...
Iiplati zeBarbon zePlaza yeCarbon Backsplash yexabiso eliphezulu Iipleyiti zeglasi yekharbon zinokusetyenziselwa ukubuyisela iipleyiti zekharbon fiber ngeedroni. Ubungakanani obuqhelekileyo bephepha lephepha lekhabhoni limalunga ne-500x600mm....
Iidrones / RC Isakhelo seplabhlikhi yeKhabhoni kwiBhalbhu Ngaphandle kwamacwecwe eekhabhoniboni ezigcweleyo, sikwanazo neeplatifti zeglasi yecarbon. Ubungakanani obuqhelekileyo bephepha lephepha lekhabhoni limalunga ne-500x600mm. Ingcaciso...
Zonke iiThayile zeCarbon zeClassbon zeCarbon Ngokwahlukileyo kwi-carbon fiber egcweleyo, olu hlobo lwengceba lwenziwe ngeglasi yecarbon. Ubungakanani obuqhelekileyo bephepha lephepha lekhabhoni limalunga ne-500x600mm. Ingcaciso yeMveliso: Into...
IBhodi yeeCarbon Carbon Hardness yeNkonzo Ngokwahlukileyo kwi-carbon fiber egcweleyo, olu hlobo lwengceba lwenziwe ngeglasi yecarbon. Ubungakanani obuqhelekileyo bephepha lephepha lekhabhoni limalunga nama-400x500mm. Ingcaciso yeMveliso: Into...
I-CNC ikhabhoni enomgangatho weglasi Ngokwahlukileyo kwi-carbon fiber egcweleyo, olu hlobo lwengceba lwenziwe ngeglasi yecarbon. Ubungakanani obuqhelekileyo bephepha lephepha lekhabhoni limalunga nama-400x500mm. Ingcaciso yeMveliso: Into No.:HCG002...
Indawo yokuThengisa iAmazon eshushu yeGlass Carbon Plate Kwi-FPV okanye i-UAV, ihlala ifuna iicarbon fiber. Kananjalo nabathengi banokukhetha iphepha lekhabhon fiber okanye iglasi sheet. Ingcaciso yeMveliso: Into No.:HCG001 Izixhobo: Iglasi yeCarbon...
Iiplaza zeglasi zeKhabhoni Matte Glossy Hobby Toy Iiplaza zeglasi yekhathuni matte glossy hobby toy toy : imveliso yecarbon eqinisiweyo yomelele yendlela yecala elinye, inkqubo yokubumba yikharbhon fiber efakwe kwi-resin emva kokunyanga kwisikhunta...
Iphepha le-3K Elukiweyo leKhabhoni yeKhabhasi yeeMijikelezo ezininzi Eli phepha lekhabhathi yeglasi, i-3K Woven Carbon Glass Sheet yeeMult-rotors zithandwa kakhulu kwizixhobo zefayibha zekhabhoni. Zombini i-0/90 degree kunye ne-0/45 / -45 / 90...
Ikhabhathi yeglasi yeCarbon Fibre Iplati yeCarbon Glass sheet inokusebenzisa ngokupheleleyo amandla e-carbon fiber kunye nemodyuli ye-elastic, kulwakhiwo olunokususa i-carbon fiber engafunekiyo ngendwangu ye-resin yokuphilisa kwinqanaba,...
Ixabiso lento: USD 25 / Piece/Pieces
I-0,5x250x400 yokuhombisa umphezulu wekhabhathi yeglasi I-0.5x250x400 yokuhombisa umphezulu wekhabhoni eshitiweyo isetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zezinto zesinyithi, iimpahla zesikhumba, iipensile, iincwadana ezinobhalo, ubucwebe,...
KwiChina Ikhabhathi yeglasi yeKhabhoni Abaxhasi
Ihlanganiswe ziicarbon fibers kunye neeglasi zeefayile eziwela ku-90 ° zingafakwanga i-epoxy resin kwaye zibunjiwe phantsi kwe-vacuum ehovini.
Ifanelekile yokwenza iipleyiti zokunyuka kwemoto, iidesika zerediyo, iimpondo, njl. Olu hlobo lwephepha linomphezulu ofanayo ne-carbon fiber sheet.Enye amandla omeleleyo, ububanzi kunye nokuguquguquka.Amashiti eglasi enqabileyo anomxinzelelo ngakumbi kwaye omelele kodwa awabizi, nawo akwanazo ithandwa kakhulu kwimifanekiso ye-carbon fiber.Our ubungakanani obuqhelekileyo buyi-200x250mm, 200x300mm, 250x400mm, 400x500mm kunye ne-500x600mm.kodwa usiko olwenziwe ngokwesiko kunye nenkonzo ye-CNC nazo zilungile kuthi.
Ukuchaneka okuphezulu okucwangcisiweyo okwenziwe ngamacandelo e-CNC kumatshini
Umatshini wokukroba iAluminiyam ezingama-7075 yeAlkopu
I-aluminium e-standard alnc
Ukomelela okuphezulu kwe-100% 25mm yecarbon yecarbon fiber
Ikhabhathi yeglasi yeKhabhoni Ikhabhathi yeglasi yeKhabhasi Mid Ikhabhathi yeglasi ye-Carbon Glass Ikhabhathi yeglasi yeCarbon Fibre Ikhabhathi yeglasi yeCarbon